Qaabka dhijitaalka ah ee rinjiga saliida Jeremy Mann | Abuurista khadka tooska ah
Ma doonayo in si khaldan la ii fahmo, rinjiyeynta saliida waa ka fog tahay dhijitaalka, laakiin markii ugu horreysay ee aan arkay sawirka madaxa ee Mann, waxa ugu horreeya ee aan fahmay waxay ahayd inaan eegay shaqo dijitaal ah oo lagu qabtay Photoshop. Taasi waxay ahayd aragtidayda ugu horreysay mana ahan farsamo yaraanta, laakiin in badan oo ka mid ah qaybaha dhijitaalka ah ee ugufiican waxay leeyihiin noocyadaas faaligyo sida wanaagsan ee Mann ugu qeexayo qaar ka mid ah shaqooyinkiisa sawirada ah.
Yaabkii weynaa ayaa yimid markii danbe Waxaan weyddiistay shuqulladiisii ​​hadhay in lala yaabo qaabkiisa gaarka ah iyo waxa aan ugu yeeray "digital." Ma ihi qof aan allifaado wax lamid ah, laakiin waxaan wareejinayaa oo keliya raadadkaas aniga la igu sameeyay markii aan ka fikiray shaqada rinjigan gaarka ah.
Iyo kuwa istaroog ee dhumucda weyn ee saxda ah faahfaahinta qaarkood, waxay noqdaan kuwo aad u fiican marka Mann waxaa qaada xamaasad taasi waxay ku jirtaa sawirka gacmaha.
Gacmo yar oo aad u tiro badan rinjiyeyaasha qadiimiga ah ayaa ka tagay kuwa kale iyaga si ay u dhammeeyaan taasna waxay uga dhigneyd ilko xanuun badan rinjiyeyaal kale oo badan.
Ma aha oo kaliya Mann wuxuu u heellan yahay inuu la yaabo qaabkiisa iyo sawirkaas dheddigga ah ee aan wareegi karin oo aan dhiman karin, laakiin halabuurka muuqaalka magaalooyinka waxaan ka helnay qaybo farshaxanno ugu fiican.
Qaarkood muuqaalada magaalooyinka in aan kaaga tago maxaad ogaatay kaaga iska leh bogga internetka taas oo aad ka heli karto inta ka dhiman shaqadiisa.
Un rinjiile dejinaya Oakland, California iyo inuu helay abaalmarino badan sidoo kale waxaa lagu xusay inuu ka mid yahay 25ka fanaan ee berrito daabacaad caan ah.
Adiguba waxaad leedahay Facebook, inkasta oo aanu daabicin wax badan oo ka mid ah shaqadiisa. Nasiib wanaag waan haysannaa uu instagram halka ay u muuqato in waxay u badan tahay inay daabacaan shaqooyinkiisa cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Qaabka si gaar ah "dijital" ugu ah rinjiyeynta saliidda Jeremy Mann
Indha-indheynta indha-sarcaadka ah ee sawirrada Faiza Maghni